Emi odude n'ime mgbidi nke ụwa kasị nta mba, Vatican City, St Peter nnukwu ụlọ ụka Senti bụ ịrụ ụka adịghị otu n'ime mmepeanya kasị ukwuu feats nke ije na art. ugbu a a isi mma ịbịaru 10 nde ọbịa a afọ, a pụtara Ọdịdị ihu St Pita Square na-anya isi ihe opulent Nchikota nke mere ihe akụkọ art, ogidi marble, na dome akara ngosi mosaic nke Michelangelo haziri (nke ị nwere ike ịrị elu nke, i kwesịrị amaja na-na 491 emee n'ụzọ!).
Dị na Turkey dị transcontinental obodo, Istanbul, Sultan Ahmed alakụba na--ezo dị ka The Blue alakụba n'ihi na nke ya pụrụ iche-acha anụnụ anụnụ n'ime ime. Wuru site Ottoman ọchịchị Ahmed m n'etiti 1609 na 1616, a nnukwu Ọdịdị-eme dị ka ma a isi njegharị mma na ifịk ebe ofufe, pụtara ụlọ alakụba na-emechi na-abụghị ndị na-efe n'oge ise kwa ụbọchị ekpere – enwere ike ịlele oge ikpe ekpere ebe a tupu ị gara.
E nwere a siri ike uwe koodu na niile ọbịa ga-rube isi tupu ha abanye na ụlọ alakụba. Firstly, akpụkpọ ụkwụ ga-ewepụ ma na enịm ke doro anya plastic akpa nyere site na ụlọ alakụba n'efu – ị ahụ nwere nhọrọ na-ahapụ gị akpụkpọ ụkwụ na a cubby oghere ma ọ bụ na-ebu akpa na ị. Mgbe ọ na-abịa gị uwe, mmadụ na-ahọrọ rụrụ uwe ma hụ na ha ụkwụ na-ekpuchi, na-ezere ihe ndị dị otú ahụ dị ka akwa nchekwa na nịịka. Ụmụ nwanyị kwesịkwara iyi uwe na-adịghị mma mgbe ha na-ahụ maka ogwe aka ha, ụkwụ, na ntutu isi na-ekpuchi na niile ihe. Nke a pụtara na ndị inyom na-atụ anya na-eyi a headscarf mgbe n'ime na, dị ka nke a nwere ike a echiche ọhụrụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-abụghị Muslim Western ọbịa, anyị nwere ike ikwu na-amụta otú n'ụzọ ziri ezi na-eyi obi umeala a uwe dị oké mkpa tupu ị na-eme njem.
Open ka na-aga chọọchị na ndị ọbịa kemgbe narị afọ nke 19, The Sagrada Familia nnukwu ụlọ ụka Senti ị enweta 4.5 nde ọbịa kwa afọ na-arụ ọrụ ugbu a ticketed entry usoro dị ka a N'ihi – these are available to buy online up to two months before the date of your visit. Ndị a tiketi na-arụ ọrụ na ofu entry ugboro ka a n'aka mbenata njubiga ókè nke mmadụ, Otú ọ dị, ozugbo ị na-na na n'ime ị na-free na-eji dị ka ogologo dị ka ị ga-amasị-ekiri nnukwu ime. Anyị na-akwado ikwe ọ dịkarịa ala 2 awa kwesịrị iri na a ụkpụrụ ụlọ ijuanya. Maka ọbịa na-achọ ịga a na chọọchị ọrụ, uka na-ẹkenịmde ke 9am ọ bụla Sunday na 8pm ọ bụla Saturday, na-adịgide adịgide 1 hour na-eduziri ọtụtụ asụsụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “3 Europe kwesịrị-Lee ebe ofufe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-places-worship%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Abụ m onye okike na nwanyị Alakụba dị mpako maka oge m anaghị ede ederede na ọrụ m bụ ime abayas, hijabs na ọtụtụ uwe ndị Alakụba mara mma maka ụmụ nwanyị. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m